Tababar Loo Furay Xirfadlayaasha Hay’adaha Cadaalada. - Cakaara News
Tababar Loo Furay Xirfadlayaasha Hay’adaha Cadaalada.
Jigjiga(cakaaranews), Arbaca, 14ka, September, 2016. Tababar ay soo diyaarisay xarunta tababarada xirfadlayaasha hay’adaha cadaalada DDSI oo ay ujeedadiisu tahay sidii kor loogu qaadilahaa garaadka aqooneed ee xirfadlayaasha hay’adaha cadaalada ayaa ka furmay jigjiga.
Waxaana furitaankii tababarka ka hadlay hogaan ku xigeenka nabadgalyada maamulka iyo cadaalada DDSI mudane Ibraahin Maxamuud Mubaarak. Wuxuuna ka warbixiyay ahmiyada uu tababarkani u leeyahay xirfadlayaasha hay’adaha cadaalada. Masuulka ayaa sheegay in tababarkani yahay mid kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee xirfadlayaasha hay’adaha cadaalada DDSI loona baahan yahay in ay xirfadlayaashan fahan buuxa ka qaataan nuruucaha kala duwan ee dalka iyo deegaanka gaar ahaan dastuurka JDFI iyo kan DDSI si ay bulshada u siiyaan adeeg hufan oo cadaaladeed.
Waxaa kale oo ka hadashay furitaankii tababarkaasi gudoomiye ku xigeenka maxkamada guud ee DDSI gaar ahaan waaxda arimaha madaniga ah marwo Samsam Xaaji Maxamed oo ka warbixisay faa’iidooyinka uu leeyahay tababarkan. Waxayna sheegtay in nidaamyada shaqo ee hanaanka caddaalada ee dalka iyo deegaanka laga dhigay mid firfircoon oo natiijo leh. Waxayna ku boorisay xirfadlayaashan qaadanaya tababarka in ay mudada uu socdo si fir-fircoon uga qayb-qaataan si marka ay gootii shaqada ku noqdaan u keenaan natiijo balaadhan.